Mpanamboatra milina fitotoana milimetatra milimetatra, mpamatsy - China Millimeter Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Fampiharana sy endri-javatra SUD1000H dia milina fampiraisana volo. Izy io dia ampiasaina hanamboarana fantsom-bozaka sy fittings toy ny kiho, tees, hazo fijaliana, wye ary vozona flange tsy misy fitaovana fanampiny amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo clamp fotsiny. Izy io dia mety amin'ny fametahana fantsona plastika sy fittings vita amin'ny HDPE, PP, fitaovana PVDF. Ny takelaka fanafanana PTFE azo esorina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana. Fitaovana fanomanana herinaratra. Vita amin'ny fitaovana maivana sy matanjaka be; rafitra tsotra, kely ary ...
Fampiharana sy ny endri-javatra SUD315H dia milina fanamafisam-peo. Izy io dia ampiasaina hanamboarana fantsom-bozaka sy fittings toy ny kiho, tees, hazo fijaliana, wye ary tendany flange nefa tsy misy fitaovana fanampiny amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo clamp fotsiny. Izy io dia mety amin'ny fametahana fantsona plastika sy fittings vita amin'ny HDPE, PP, fitaovana PVDF. Ny takelaka fanafanana PTFE azo esorina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana. Fitaovana fanomanana herinaratra. Atao fitaovana maivana sy matanjaka be; rafitra tsotra, kely ary ...
Fampiharana sy ny endri-javatra SUD200H dia milina fampifangaroana volo. Izy io dia ampiasaina hanamboarana fantsom-bozaka sy fittings toy ny kiho, tees, hazo fijaliana, wye ary vozona flange tsy misy fitaovana fanampiny amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo clamp fotsiny. Izy io dia mety amin'ny fantsom-bozaka plastika sy fittings vita amin'ny HDPE, PP, fitaovana PVDF. Ny takelaka fanafanana PTFE azo esorina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana. Fitaovana fanomanana herinaratra. Atao fitaovana maivana sy matanjaka be; firafitra tsotra, kely sy del ...
Fampiharana sy ny endri-javatra SUD160H dia milina fampifangaroana volo. Izy io dia ampiasaina hanamboarana fantsom-bozaka sy fittings toy ny kiho, tees, hazo fijaliana, wye ary tendany flange nefa tsy misy fitaovana fanampiny amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo clamp fotsiny. Izy io dia mety amin'ny fantsom-bozaka plastika sy fittings vita amin'ny HDPE, PP, fitaovana PVDF. Ny takelaka fanafanana PTFE azo esorina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana. Fitaovana fanomanana herinaratra. Atao fitaovana maivana sy matanjaka be; rafitra tsotra, kely ary ...